ESI MEE KA A TỌGHATA MP3 KA Ọ DỊ NA YA - ỌRỤ NTANETỊ - 2019
Tọghata MP3 na WAV n'Ịntanet
Ọ bụghị mgbe niile, anyị na-ama ụma tinye ngwá ọrụ toolbar ndị ọzọ (toolbars) na ihe nchọgharị ahụ. Ọtụtụ mgbe, nke a na-eme site n'amaghị ama maọbụ enweghị nchekasị. Ma wepu ihe akụrụngwa a site na ihe nchọgharị dị ezigbo ike. Enwere m obi ụtọ na e nwere ihe ndị dị mkpa nke na-ahụ maka iwepụ ụdị ntinye ndị ahụ. Otu n'ime mmemme kachasị mfe nke na-ewepu ngwá ọrụ bụ uru AntiDust.
Ngwa AntiDust n'efu na-adị mfe, ma n'otu oge ahụ, usoro ụlọ dị irè maka iwepu ihe nchọgharị weebụ ndị ọzọ site na ihe nchọgharị. Ọ bụghị ọrụ ọ bụla ọzọ, ma ọ bụ ọbụna interface ya.
Ihe omumu: Otu esi wepu mgbasa ozi na ihe nchọgharị Google AntiDust
Anyị na-akwado ịhụ: mmemme ndị ọzọ iji wepụ mgbasa ozi na ihe nchọgharị ahụ
N'ezie, naanị ọrụ nke usoro AntiDust bụ iji wepụ ihe ntinye ngwá ọrụ dị iche iche site na ihe nchọgharị. Enweghi ike ime ya. Ihe omume ahụ enweghị ọbụna interface ya, ebe ọ bụ na ọ na-arụ ọrụ na ndabere. Mgbe nyochaa nke nchọta ihe nchọgharị na ntanetị, ị ga-ahụ windo uninstaller, nke ga-enye iji wepu ngwá ọrụ. Na enweghị mpempe akwụkwọ ndị ọzọ sitere na ihe nchọgharị, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na usoro ahụ enweghị ike ịchọpụta ha, AntiDust agaghị amalite ma ọlị.
A na-akwado ngwá ọrụ ndị ọzọ na tinye-ons: Mail.Ru Sputnik, Guard.Mail.ru, AOL Messaging Toolbar, Yandex.Bar, jụọ Toolbar na ụfọdụ ndị ọzọ.
Uru nke AntiDust
Naghị achọ nhazi;
Ihe bara uru dị mfe iji;
Okwu nke okwu Russian.
Ọghọm nke AntiDust
Na-efu ọrụ ndị ọzọ;
Usoro mmemme ahụ adịghị akwado ya ugbu a site n'aka onye mmepụta.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ngwa AntiDast ga-adọrọ mmasị ndị ọrụ ahụ dị mkpa iji wepụ ngwaọrụ toolbar achọghị na ihe nchọgharị ahụ, ọ dịkwaghị arụ ọrụ ọ bụla. Ngwa a ga-enyere ngwa ngwa na mfe ịnagide nsogbu a. Mana, ihe omumaghachi ya dị ịrịba ama bụ na ndị na-emepe emepe adịghị akwado ya.
Download AntiDust maka n'efu
Cleaner Toolbar Wepu mgbasa ozi na ihe nchọgharị Na-egbochi mgbasa ozi ịrịa ọrịa na Mozile site na iji ngwa ọrụ Cleaner Usoro mmemme maka iwepu mgbasa ozi na ihe nchọgharị
AntiDust bụ ngwá ọrụ ngwanrọ dị irè iji wepụ ihe ndọtị nke atọ na mkparịta ụka ndị achọghị na nchọgharị nke arụnyere n'enweghị ihe ọmụma onye ọrụ.
Onye Mmepụta: Simplix